प्रधानमन्त्रीको प्रश्न: बम पड्काउन पाइँदैन भन्दा किन रुवाबासी ?
‘विप्लव समूहलाई निषेध मात्र होइन नियन्त्रण नै गरिन्छ’
विराटनगर — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टी कुनै कार्यालयमा दर्ता नभएको अनधिकृत संस्था भएको बताए ।
विराटनगर विमानस्थलमा आइतबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, जुन संस्था विधिवत छैन, यस्तो झुण्ड हो, सरकारले यस्तो संस्थालाई चिन्दैन । प्रधानमन्त्रीले ओलीले विप्लव समुहका बारेमा धारणा राख्दा नेताहरुलाई सचेत हुन आग्रहसमेत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूह राजनीतिक दल नभएको उल्लेख गर्दै उक्त समूहले गरेका विध्वंसात्मक गतिविधिमात्रै प्रतिबन्ध लगाइएको जानकारी दिएका छन् ।
धानमन्त्री ओलीले भने, ‘बम पड्काएर उद्यमी, व्यवसायी, जनप्रतिनिधिलाई धम्क्याउने । बम पड्काइरहेको छ, धम्क्याइरहेको छ, अनि यस्तो गर्न पाइँदैन भन्दा रुवाबासी ? कसैले रुवाबासी गरे पनि सरकारले विप्लव समूहलाई निषेध मात्र होइन नियन्त्रण नै गर्ने उनले बताए ।
नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमंत्री ओलीले पार्टी एकताको विषय अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै उनले पार्टी एकताका विषयमा प्राय सवै विषयमा टुंगो लागि सकेको पनि दावी गरे । त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नहुने बताए ।
उदयपुरमा विद्यार्थी कुटपिट र पत्रकार पक्राउको रहस्य !
‘धान खाने मुसा चोट पाउने भ्यागुतो’ विश्वराज तामाङ गाईघाट — उदयपुरमा असार १ गते चौदण्डिगढि
पत्रकार देवराज पक्राउको विरोध, सहकर्मीले निकाले विज्ञप्ती !
गाईघाट — उदयपुरका क्रियाशिल पत्रकार देवराज राईलाई विनाकारण प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको भन्दै विरोध भएको छ
दरबार हत्याकाण्ड: नेपालमा सत्ता परिवर्तन गराउने चर्चित घटना !
काठमाडौं — विसं २०५८ साल जेठ १९ गते राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुनेगरी भएको दरबार हत्याकाण्ड
किम र पुटिनबीच पहिलो भेटवार्ता, सम्बन्धलाई अझै सुदृढ बनाइने
उत्तर कोरियाली नेता किम जङ—अन र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले दुई देशबीच रहेको सम्बन्धलाई अझै
कुष्ठरोग: बर्षेनी हजारौं नयाँ बिरामी थपिदैँ ! कसरी बच्न सकिन्छ ?
काठमाडौँ — सरकारले कुष्ठरोग निवारणको घोषणा गरेको एक दशक बित्न लागे पनि वर्षेनी यो रोगका
थाईल्यान्ड राजनीतिको तरङ्गः को हुन् राजकुमारी उबोन्रत ?
थाई राजकुमारी उबोलरत्ना: प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा विवाद भएपछि ‘दु:खित’ थाईल्यान्डका राजाकी दिदीले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा
014478379 / 9861539428 / 9851086607